Ndinonzi Alphiey, ndiri mukomana ane makore 25 ndinotsvagawo musikana | Kwayedza
Ndinonzi Alphiey, ndiri mukomana ane makore 25 ndinotsvagawo musikana
24 Jul, 2015 - 00:07	 2015-07-24T08:50:32+00:00 2015-07-24T00:00:09+00:00 0 Views
NDINOTENDA veKwayedza ndakamuwana chaiye wandaida saka vachiri kufona pa0776 338 012 chiregai zvenyu nekuti ndave wemuridzi.
Makadii? Ndinotenda chose nevose vakafona uye vachiri kufona panhamba dzinoti 0782 382 705. Chikumbiro changu ndechekuti chiregai zvenyu kufona. Ndatenda.
Makaita basa veKwayedza neshambadzo yenyu, zvangu zvakaita saka vose vaifona pa0782 975 647 chiregai zvenyu ndakamuwana wandaida chaiye.
Ndakazomuwana wandaida, makaita basa veKwayedza saka vose vachiri kufona pa0773 982 111 chiregai.
Ndakambonyorera kuchirongwa chino ndikawana vanyengeri. Ndiri mudzimai ane makore 45, HIV positive uye ndinoshanda mumba. Ndoda murume anogara muHarare ane makore 46 zvichikwira Handina mwana, nhare yangu 0779772725.
Ndinonzi Alphiey, ndiri mukomana ane makore 25 ndinotsvagawo musikana akanaka anogeza, anonamata aine makore 23 kusvika 18 ari pachokwadi nekuda kuroorwa. Anondida anondibata paWhatsApp pa0778 383 086.
Makadini henyu? Ini ndiri mudzimai ane makore 38, HIV negative uye handisati ndamboroorwa. Ndinoda murume ane makore 40-45 ane vana 2 kana 1. Ndinoda anoshanda, akarongeka, akashambidzika uye ari pachokwadi. Anoda nezvangu ngaandibate pa0717 891 441.
Ndiri murume ane makore 27 nemwana mumwe, ndotsvagawo mukadzi wekuroora ane mwana mumwe. Ane makore 19 kusvika 24 ngaandibate pa0774 276 609.
Ndiri murume ane makore 27 nemwana mumwe chete ndiri kutsvaga mudzimai ane makore 21 — 26. Anondida ngaandibate pa0772 327 349.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 22, HIV negative uye handishande. Ndinodawo musikana ane makore 18 — 20 ari HIV negative anoshanda kana a
Makadii henyu? Ndiri murume ane makore 37 nevana vaviri ndinotsvagawo mukadzi anoda zvemba. Nhare yangu 0777 645 875.
Makadini? Ini ndiri mukomana ane makore 24 ndinodawo musikana ane makore 18 kusvika 23 akanaka anoenda kuchechi. Akavimbika ngaandibate pa0773 184 619.
Makadini veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 23 ndinotsvagawo musikana akavimbika uye ari pachokwadi. Andifarira ngaandibate pa0777 141 412.
Ndiri mukadzi ane makore 39 nevana 2 ndodawo murume akavimbika ane makore 44 kusvika 47. Nhamba yangu 0775 261 594.
Ndiri murume ane makore 28 nemwana 1 ndinodawo mudzimai ane makore 21 kusvika 26 akanaka. Ndinoita basa remawoko, nhare yangu 0774 120 511.
Ndiri murume ane makore 35, ndinoshanda muHurumende uye handina chirwere. Ndotsvakawo mukadzi anoshanda achigara muHarare. Andida anondibata pa0715 208 084.
Ndiri murume ane makore 39 ndinodawo mukadzi ane makore 25 kusvika 30. Akasununguka anondibata pa0713 675 928. Ndinoda ane mwana kana asina.
Ndiri mukadzi ane makore 45 ndinotsvagawo murume ane makore 50 kusvika 60. Ndiri HIV positive, anondida ngaandibate pa0733 626 836.
Makadii veKwayedza? Ndiri mudzimai ane makore 34 nevana 3, ndinogara muHarare uye ndinoita basa ramawoko. Ndinorarama neHIV, ndinodawo murume anoda kuroora akashambidzika, ane zvaanoitawo muhupenyu. Nhare yangu 0775 738 042.
Ndiri kutsvagawo musikana wekushamwaridzana naye ane makore 18 — 21 ari pachokwadi. Anoda nezvangu ngandibate pa0782 379 313.
Ndiri mukomana ane makore 36. Ndinotsvagawo musikana ane makore 30 zvichidzika ari HIV negative. Anogara kwaMutare ngaandibate pa0775 698 457.
Ndiri murume ane makore 37 nevana vaviri. Ndinodawo mudzimai ari pachokwadi ane mwana mumwe chete, ari HIV negative. Vanoda fonai kana kutumira sms pa0776 054 667.
Ndiri mukomana ane makore 29 ndinotsvagawo musikana ari pachokwadi ave kuda zvemba ane makore 24 zvichidzika. Nhare yangu 0716 825 197.
Ndiri musikana ane makore 21 ndinotsvagawo mukomana kana murume ane vana vake. Ndinoda anoshanda ane makore 30 – 40. Ndinobatika pa0775 076 755, zvimwe tozotaura.
Ndinozi Christopher Asado, ndiri kuda musikana kana mukadzi wekuroora akarongeka, ari pachokwadi aine makore 20 kusvika 26. Ini ndine makore 29, nhare yangu 0772 233 783.
Makadii veKwayedza? Pamberi nekugona basa. Ini ndiri mukomana ane makore 20 ekuberekwa ndotsvakawo musikana wekushamwaridzana naye kusvikira pakuroorana ane makore ari pasi pe20. Ndinoda akazvipira kunotorwa ropa uye anotyawo Mwari. Anoda ngaandibate pa0776 263 602 asi kwete mvana.
Ndiri mukadzi ane makore 34 nevana 3 ndinodawo murume ane makore 35 — 40 ari kuda zvekuroora. Nhare yangu 0774 314 747.
Ndiri mukomana chaiye anotsvaga musikana wekushamwaridzana naye ane makore 21 ane rudo nekuti ini ndinarowo. Nhamba yangu 0779 014 317.
Ndiri mukadzi ane makore 42 ndotsvagawo murume akatendeka ane makore 43 kusvika 50. Anenge andifarira ngaandibate pa0774 985 632.
Makadii veKwayedza? Ini ndiri mukomana ane makore 22 ekuberekwa ndiri kutsvagawo musikana wekuroorana naye ane makore 18 kusvika 22 ari pachokwadi seni. Anondida nhamba dzangu idzi 0779 912 718.
Makadini veKwayedza? Ini ndiri mukadzi ane makore 20 nemwana 1, ndiri HIV negative. Ndinotsvagawo murume, anondida anondibata pa0782 678 592.
Makasimba here? Ndiri mukadzi ane makore 32 ndinoshanda mumba, HIV positive uye ndine mwana 1. Ndodawo murume ari pachokwadi anonamata asi varume vevanhu kwete. Fonai pa0716 442 874.
Ndiri mukomana ane makore 28 ndoda musikana ari pachokwadi uye vanoda zvekutamba imbomirai. Nhare yangu 0716 363 898.
Ndiri mukomana ane makore 24 ndinotsvakawo musikana mhandara ane 18 – 20 ari pachokwadi. Macall back kwete, ndibatei pa0737 364 914.
Ini ndiri murume ane makore 35 nemwana mumwe ndinodawo mudzimai ane mwana 1 kana 2 ane makore 26 kusvika 33. Nhare yangu 0773 162 656.
Ndinodawo musikana ane makore 18 — 21 ari HIV positive. Nhare yangu 0738 361 427.
Ndiri mudzimai ane makore 40 nevana vatatu, ndinonamata kumasowe uye ndiri HIV negative. Ndakafirwa nemurume saka ndinodawo murume ane makore 44 kusvika 50 asina mukadzi anonamata. Ngaave asinganwe doro kana kuputa fodya, anoda zvekuongororwa ropa. Anenge andifarira ngaandibate pa0735 434 793 chero nguva.
Makadii veTishamwaridzane? Ndiri murume ane makore 27 handisati ndamborora, ndinotsvagawo musikana mhandara akavimbika uye anotya Mwari. Nhare yangu 0776 645 129.
Makadii? Ndiri mukomana ane makore 23 ndinotsvagawo musikana ane makore 20 zvichidzika anoda zvekuwanikwa kwete zvechifambi. Nhare yangu
Ndiri mukomana ane makore 25 ndinotsvaga musikana ane makore 22 zvichidzika ave kuda zvekuroorwa. Anondibata pa0783 338 718.
Makadii veKwayedza? Ndiri musikana ane makore 27 uye handina kumboroorwa ndodawo mukomana kana murume, ane mwana kana asina ave kuda zvemba ane makore 29-38. Vari pachokwadi chete ndibatei 0774 368 036.
Ndiri murume ane makore 33 nemwana mumwe ndinotsvagawo mudzimai ane makore 25 — 29 ane mwana seni. Vanotamba kwete, andifarira nhare yangu 0776 224 767.
Ndiri mudzimai ane vana vaviri, HIV positive ndinotsvagawo murume anoda zvemba ane makore 40 zvichienda mberi. Nhare yangu 0782 018 347.
Ndiri mukadzi ane makore 24 nemwana 1, ndinoshanda basa remawoko. Ndinotsvagawo murume, nhare yangu 0779 161 611.
TISHAMWARIDZANE17 Apr, 2019
Tishamwaridzane28 Dec, 2018
Tishamwaridzane21 Dec, 2018